Mgbanwe nke Onye-nwe, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 6 | Ilblogdellafede
Ngbanwe nke Onye-nwe, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 6
Akụkọ banyere nnwogha nke Onyenwe anyị
Oziọma atọ a na-ekwupụta na-akọ akụkọ banyere nnwogha ahụ (Matiu 17: 1-8; Mak 9: 2-9; Luk 9: 28-36). Site na nkwekọrịta dị ịrịba ama, ha atọ debara ihe omume ahụ obere oge ka nkwuputa okwukwe nke Pita na Jizọs bụ Mezaịa ahụ na amụma mbụ Jizọs buru banyere agụụ na ọnwụ ya. Enthusinụ ọkụ n’obi nke Peter maka idozi ụlọikwuu ma ọ bụ ụlọ n’elu ebe ahụ na-egosi na ọ mere n’oge ezumike nke ndị Juu n’otu izu n’izu.
Dabere na ndị ọkà mmụta nke Akwụkwọ Nsọ, n'agbanyeghị nkwekọrịta nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ, o siri ike ịmaliteghachi ahụmịhe nke ndị na-eso ụzọ, n'ihi na Oziọma ndị ahụ kọwakwuru nkọwa banyere Agba Ochie banyere njikọ a nke Saịnaị na Chineke na ọhụụ amụma nke Nwa nke mmadụ. N’ezie Pita, Jemes, na Jọn emewo ka amata Chukwu nke Jizọs nke ruru ike itu egwu n’ime obi ha. Ahụmahụ dị otú ahụ na-emegide ịkọwa ya, yabụ ha ji asụsụ okpukpe a maara nke ọma akọwa ya. N'ezie Jizọs dọrọ ha aka na ntị na ekwesighi ịjụta nsọpụrụ ya na ahụhụ ya, isiokwu nke John na-eme ka ozi ya pụta ìhè.
Omenala kpọrọ ugwu Mount Tabor dị ka ebe mkpughe. Churchka buru ụzọ guzobe ebe ahụ na narị afọ nke anọ raara na 6 Ọgọst. Ihe dị ka oriri a iji sọpụrụ nnwogha ahụ bụ nke a na-eme na Nzukọ ụka Ọwụwa Anyanwụ site n'oge ahụ gaa n'ihu. Ememe ememe ọdịda anyanwụ malitere n'ebe ụfọdụ n'ihe dị ka narị afọ asatọ.
Na July 22, 1456, ndị agha meriri ndị Turkey na Belgrade. Akụkọ banyere mmeri ruru Rome na August 6 na Pope Callixtus nke Atọtibaara oriri ahụ na kalenda ndị Rom n'afọ na-esote.
A na-agụ otu n'ime ndekọ nnwogha kwa afọ na Sọnde nke abụọ nke Lent, na-ekwuwapụta na ndi a hoputara ka ndi Kraist a hoputara ma ndi emere Chineke baptism. N'aka nke ozo, ozi oma banyere Lent nke Lent, bu akuko anwa anwa n’ime ozara - ngbuputa nke mmadu nke Jisos.Ahe ngosiputa abuo nke puru iche ma nke puru iche nke Chineke bu isi okwu nke nkwurita uka banyere otutu na ulo uka; ọ na-esiri ndị kwere ekwe ike nghọta.
← Na post gara aga Gara aga post:Na-atụgharị uche taa maka mgbanwe nke Chineke mere na mkpụrụ obi gị
Ọzọ Post → Post ozo:Ezi ofufe n'oge nke ụbọchị: na-ezere ihe na-abaghị uru